Amazon waxay hoos u dhigtay 200 $ qiimaha Roomba 960-robot vacuum nadiifiye sare leh oo leh nadiifiye leh Alexa - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Amazon waxay hoos u dhigtay qiimaha 200 $ ee Roomba 960 robot vacuum vacuum oo ay la socoto Alexa - BGR
Haddii aad rabto mid ka mid ah meelaha ugu roon ee robotic-ga ee lacagtu soo iibsan karto, dooro moodooyinka sare ee kala duwan ee Roomba. Weligaa ma heli doontid nuugis noocaas ah oo xoog badan, ama moodallo sida hodan ku ah sida noocyada kale. Qalabka firaaqada ah ee robotka iRobot Roomba 960 waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan, laakiin aad ayey qaali u tahay 700 $. Booqo Amazon hadda, oo waxaad ka iibsan kartaa hal kaliya 499 $!
Soo jiidashada kor u qaadida xoogga leh waxay u fidisaa 5 jeer awood hawo badan * oo ah waxqabadka qaadista si ka wanaagsan. * (Marka la barbar dhigo nidaamyada Roomba 600 iyo AeroVac)
iAdapt 2.0 teknoolojiyadda duulista leh ee tikniyoolajiyadda vSLAM waxay u oggolaaneysaa robotku inuu khariiddeeyo deegaankiisa si uu u nadiifiyo dhammaan heerarka gurigaaga, hareeraha walxaha iyo qalabka guryaha hoostiisa.
Ku habboon guryaha leh xayawaannada guryaha lagu haysto. Tallaabooyinka Nidaamka Nadiifinta ee 3 waxay nadiifisaa wasaqda iyo timaha xayawaanka, iyo sidoo kale xasaasiyadda iyo boodhka aad aragto.
Burushyo laba jibbaaran oo dusha sare ah oo jilicsan ayaa isku dhejiya oo laalaab si ay ula xiriiraan roogaha iyo dabaqa adag.
Xaddiga tayada sare leh ee shaandhaynta ayaa xirmay 99% bisadaha iyo xasaasiyadda eeyaha.
Si otomaatig ah ayuu dib ugu soo celiyaa hadba sida loogu baahdo, ka dib wuxuu sii wadaa nadiifinta illaa dhamaadka shaqada.
Ku xir oo qorshee shaqadaada meelwalba. Adeegso amarrada codka ama kaaliyaha Google si aad u maamusho nadiifinta. U adeegso barnaamijka guriga ee iRobot si aad u sameysato jadwalka iyo la socoshada fadhiyada nadiifinta.
Tilmaamida Muhiimadda Roomba: Iskuxirka Wi-Fi, duulista caqliga leh, tikniyoolajiyada Dirt Detect, burushka iskaanka cirifka, madaxa nadiifinta is-hagaajinta, waxay ka shaqeysaa roogaha iyo sagxadaha adag  Box Content: 1 Roomba robot vacuum vacuum nadiifiye nadiif ah 960 wuxuu ku xiran yahay shabakadda Wi-Fi, saldhigga xaraashka guriga ee 1, 1 fiilada korantada waqooyiga Mareykanka, 1 filter filter tayo sare leh AeroForce dheeraad ah, 1 dhinac burush dheeraad ah, xayndaab xayndaab ah oo xNUMX ah oo leh laba nooc (baytariyada 1 AA) ayaa lagu daray) , Tilmaanta milkiilaha, Qalabka Dukumentiyada
iRobot ma cadeeyo tayada ama xaqiiqada badeecada laga soo iibsaday iibiyayaal aan la fasaxin oo ku saabsan Amazon mana dabooli doono sheegashooyinka, ma bixin doonto adeeg, ama ma badali doonto badeecadaha laga soo iibiyey iibiyaashaas.  Raac @BGRDeals on Twitter si aan kugu wargalinno dalabyada ugu dambeeyay ee xiisaha leh ee lagu daabacay mareegtada. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.